Thantlang – Travel Chin State
ထန်တလန်မြို့သည် ချင်းပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးမှ တစ်နာရီခန့် မော်တော်ယာဉ်(သို့) ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ထန်တလန်မြို့ကို စိမ်းပြာရောင် တောင်တွေ အထပ်ထပ်ဖြင့် ဝန်းရံထားပါသည်။ ထန်တလန်မြို့သည် Vuichip တောင်နှင့် Marau တောင်ကြားတွင် ရှိပြီး အရှေ့ဘက်မှ Buhva ချောင်းနှင့် အနောက်ဘက်မှ Lahva ချောင်းတို့ စီးဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ထန်တလန်မြို့တွင် လှပသောရှုခင်းများအပြင် Hauka Bung Resort နှင့် ဟားခါး – ထန်တလန် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ No Mang မိဘမဲ့ ဂေဟာပန်းခြံကိုလည်း လည်ပတ် နိုင်ပါသည်။
Na tho tha maw
[ Na thau hta maw ]
[ Na dam maw ]
Na ei cang maw?
[ Na aiy cang maw ]
Zei tin kal khawh la?
[ Zei tinn kal khawh la ]
Na ka bawm kho la maw?
[ Na ka bawm kho la maw ]
ကျီရီယန်းတောင်သည် ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့နယ် သီကီရ်းကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီး ထန်တလန်မြို့မှ (၄၃)မိုင်ကွာဝေးပါသည်။ တောင်ပေါ်အမြဲစိမ်းတော၊ ထင်းရှုးတော နှင့် မြက်ခင်းတော အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သစ်မျိုးစိတ်များ၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၊ နို့တိုက် သတ္တဝါများနှင့် ငှက်မျိုးစိတ်မျိုးစုံ ကျက်စားသည့် နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျီရီယန်းတောင် ဒေသတစ်ဝိုက်သည် ရေမြေ၊ ရာသီဉတုနှင့် သဘာဝအနေအထားများ ထူးခြားကောင်းမွန်နေသည့်အတွက် သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် တောင်တက်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိပါသည်။ ကျီရီယန်းတောင်နှင့် (၇)မိုင်ခန့် အကွာတွင် သီကီရ်းဆည် တည်ရှိသည့်အတွက် ၎င်းဆည်သို့လဲ သွားရောက် အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။
မီအေပီတောင်သည် ထန်ထလန်မြို့နယ် ဟရီဖီးရွာအနီး တစ်မိုင်ခွဲခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၆၅၀၀ ရှိပါသည်။ ရာသီဉတု ကြည်လင်သည့် အချိန်တွင် ၎င်းတောင်ပေါ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ စိုင်ဟာခရိုင်အထိ တွေ့မြင်ပြီး အဆိုပါတောင်ကြောတစ်လျှောက်တွင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၊ သစ်ခွပန်းများနှင့် တောင်ဆိတ်များ အလွန်ပေါများသည်။ ဤတောင်ခြေရှိ PhaipiNel ခေါ် ကွင်းပြင်ကြီးသည် ဧက (၃၀၀) ကျော် ကျယ်ဝန်းပြီး ရွာသူရွာသားများက စပါး၊ ပဲများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာအနီးရှိ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော မြေအောက်ချောင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းရာ Leisih လိုဏ်ဂူသည် အရှှည် ပေ(၁၀၈၀) ဖြစ်ပြီး လိုဏ်ဂူ၏ အကျယ်ဆုံးနေရာမှာ ၁၉ပေနှင့် အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ၄၇ပေ ရှိပါသည်။ လိုဏ်ခေါင်းတစ်လျှောက် ကျောက်တုံးငယ်များနှင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျှက်ရှိသော ချောင်း၏ ရေအနက်ဆုံးနေရာမှာ ၇ပေခန့် ရှိပါသည်။ ဟားခါးမြို့မှ အဆိုပါတောင်သို့ မော်တော်ယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုပါက (၄)နာရီခန့် မောင်းနှင်ကာ တောင်တက်ခရီး စွန့်စားခန်းများ၊ လိုဏ်ဂူတွင်း စွန့်စားခန်းများအဖြစ် သွားရောက်လည်ပတ် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သီကီရ်းကျေးရွာသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့နယ် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ၁၆၀၀ မီတာအထက်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟားခါးမြို့မှ (၆၀)မိုင်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး (၃)နာရီကျော် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ သီကီရ်းဆည်သည် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် ၁၅၂၄ မီတာ အထက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆည်၏ ပတ်လည်တွင် ဂျပန်ဆာကူရာ ချယ်ရီအပင် ၁၀၀၀ခန့်ကို စိုက်ပျိုးထားပါသည်။ သီကီရ်းကျေးရွာအနီးတွင် အလွန်လှပသော ကျီရီးယန်း တောင်ရှိပြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို တောင်တက်ရင်းနှင့် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဟရီးဖီးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၇၁၀ ဝန်းကျင်က ဦးလှဲလျန် (Hlei Lian) မှ ဦးဆောင်၍ လူမျိုးစု(၅)စုဖြင့် စတင်ကျေးရွာတည်ခဲ့ပါသည်။ ဟရီးဖီးကျေးရွာသည် ထန်တလန်မြို့၏ အနောက်ဘက် ၃၅ မိုင် အကွာ၊ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ပေ၅၃၀၀ တွင်တည်ရှိပါသည်။ ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကြိမ်ပင်များကို အစွဲပြု၍ ဟရီးဖီးကျေးရွာ ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာ၌ မျိုးနွယ်စုပေါင်း(၂၇)မျိုး နေထိုင်လျှက်ရှိပြီး လူဦးရေ ၈၁၃ ဦးကျော် ရှိပါသည်။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် ကျေားရွာအနီးရှိ မီအေပီတောင်နှင့် လေစိဂူသို့ သွားရောက်ကာ တောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တွင်း ခရီးသွားခြင်းနှင့် ဂူတွင်းလေ့လာခြင်းစသည့် ခရီးသွားလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။